ရခိုင်​ပြည်​နယ်​တွင်း မပါချင်း​သူ | Danya Wadi
Browsing: » Home »English Version»Articles»ရခိုင်​ပြည်​နယ်​တွင်း မပါချင်း​သူ	Leaveacomment
ရခိုင်​ပြည်​နယ်​တွင်း မပါချင်း​သူ	Posted by danyawadi on July 15, 2016 in Articles, သမိုင်း, အထောက်ထားများ, ဆောင်းပါးများ, Documents	Feb. 1961: the Rohingya appealed to the central gov. of Burma led by PM U Nu to be governed directly from Rangoon. Mujahideens didn’t represent the majority of the Rohingya people. The people didn’t want an independent Muslin state, nor did not want to be included in Rakhine state. On July 4, 1961, 290 Mujahideens surrendered and Gen. Ne Win’s ministry of Defence proceeded to implementaseparate Rohingya Administration under Mayu District banner. Lt Colonel Ye Khaung was made in charge. The ground work for this was laid by Lt-Colonel Tin Oo (now NLD Vice Chair Tin Oo, who is not being honest and truthful about what he knew – that the Rohingya were recognised as both an ethnic group of Burma and full citizens).
← ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေး အရှိန် အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်ရန် ဒ်ါအောင်ဆန်းစုကြည် ပြော	မအောင်မြင်တဲ့ တူရကီ အာဏာသိမ်းပွဲ၊ သေသူ ၉၀ ၊ ဒဏ်ရာ ရသူ ၁၁၅၄ဦး ရှိပြီ →
Popular Posts	လူနည်း စု၏ဆန္ဒကို လျစ်လျူရှုထား၍ မရ ဟု နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးထင်ကျော် က ဆို	GTC ကျောင်းသား/သူနှစ်ဦး၏ဗီဒီယိုဖိုင်	ဓည၀တီဆိုဒ်သို့မှန်ကန်သော သတင်း၊ ဆောင်း ပါး၊ ဓါတ် ပုံ များ ပေး ပို့ လို ပါ က danyawadi9@gmail.com နဲ့ ဆက် သွယ် ပါ ။ . . . If you want to post any real documents such as , History,Articles , photos and News ,Contact here.	ဆယ်တန်းကျောင်းသူလေးကိုစစ်ဗိုလ်ကြီးကအဓမ္မ ကျင့် ပါ တယ် ဆို တဲ့ ကိစ္စ အ တွက် ဆယ် တန်း ကျောင်း သူလေး ယွန်းသော် တာမြတ်နိုး ရဲ့ တောင်း ပန် စာ...	THIT HTOO LWIN Movies, Videos, VCD, Latest	အိုဘားမားကဦးသိန်းစိန်နှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ထံ ဖုန်းဖြင့် ဆက် သွယ် ဆွေးနွေး	သံလျှင် GTC ကစုံတွဲ၏လုပ်ရပ်	လိပ်ခေါင်းရောဂါနှင့် တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးအမြင်	မြန်မာ - English အင်္ဂလိပ်- အဘိဓါန်	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း	Recent Posts	မြွေဟောက် ဘယ်လို အဆိပ်ထုတ် တိုက်ခိုက် သလဲ (ရုပ်သံ)
Total guests visited လာဖတ်သည့် ဧည့်သည်ပေါင်း 3,915,592 ဦး
Visitors’ Countries Since 16-11-2012;လာဖတ်သူတို့ နိုင်ငံ	Click here to read the articles by date-posted ရက်စွဲ အလိုက် ဖတ်ရှုရန် July 2016